Famonoana mpisolovava tetsy Antanimena: nidoboka eny Antanimora ireo zanaka jeneraly roalahy | NewsMada
Taorian’ny fakana am-bavany nataon’ny fampanoavana azy ireo, naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora, omaly, ireo miaramila roalahy, zanaka jeneraly, voarohirohy tamin’ny famonoana ilay mpisolovava tetsy Antanimena.
Tara ny fampiakarana ny raharaha teny amin’ny fitsarana omaly, raha tokony ho tamin’ny 10 ora izany, ireo miaramila roa lahy Arnaud sy Erlie. Efa ny tamin’ny 12 ora vao teny amin’ny fampanoavana ny raharaha. “Nisy ny olana teo amin’ny fikarakarana ny taratasy sy ny dingana tokony narahana ka izay ny antony nahataraiky azy”, hoy ny fanazavana.
Teo ihany koa ny tsy fisian’ny mpisolovava niaro azy roa lahy ireo. Afakomaly mantsy dia nisy ny hetsika nataon’ny Holafitry ny mpisolovava ho fanehoam-piraisankina noho ny nanjo an’ity namany voadaroka ity. Mbola tonga maro teny amin’ny fitsarana ny mpisolovava omaly. Niandry ny fanendren’ny fitsarana izay mpisolovava hiaro azy ireo, araka izany, ireto miaramila ireto, vao afaka natolotra ny fampanoavana.
Rehefa nilamina ny fombafomba tsy maintsy natao, niroso tamin’ny fakana am-bavany azy roalahy ireto ny mpitsara mpanao famotorana. Taorian’izay no nampidirana azy ireo am-ponja vonjimaika eny Antanimora. Namoaka “avis de recherche” ho an’ny olona fanintelony naman’izy roa lahy ireo. Ity farany izay efa nahazo fampiantsoana, saingy tsy nipoitra no sady tsy tratra antso intsony.
Andaniny, nametraka fitoriana ilay mpisolovava ihany koa izy roa lahy ireo. Fitoriana ilay mpisolovava ho nikasa hamono azy ireo. Araka ny fanazavana, efa nisy ny fihainoana vavolombelona maro tamin’ity raharaha ity. Anisan’izany ny mpanao gazety iray izay nahita ny zava-nitranga sy anisan’ny niharan’ny herisetra ihany koa. Efa nohenoina ihany koa ny mpiambina roa lahy tao amin’ilay trano filanonana teny Antanimena. Miandry ny fitsarana azy ny raharaha.
Samy miandry ny fitsarana ny raharaha izany ny rehetra. Anisan’ny maro ny olona manaraka ity raharaha ity ary nahabe resaka. Maro ny mihevitra ny hisian’ny mizana tsindrian’ila, ny fisian’ny lava tanana sns. Raha ny omaly aloha, ireo naiditra am-ponja vonjimaika ireo iretsy miaramila roa lahy zanaka jeneraly. Anisan’ny notakian’ny rehetra ny hanamparana ny lalàna ho an’izay manao herisetra.
Heverina fa ho toy izay koa amin’ny fotoana izay hitsarana ny raharaha. Manahy hatrany ny olona fa ho afa-maina rehefa mahitahita eto amin’ny tanàna. Mendrika ny hampiharana ny sazy faran’ny henjana ny manao herisetra am-pahibemaso, na ko ny nahatonga izany rehetra izany.